अन्तिम पटक नेपालकै माटो टेकर मर्न चाहेका गणेश अतः बिदेशमै अस्ताए ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /International/अन्तिम पटक नेपालकै माटो टेकर मर्न चाहेका गणेश अतः बिदेशमै अस्ताए !
काठमाडौं । उनी जिवित छंदै आफ्नो देशको माटो टेक्न चाहन्थे । परिवारसंग जिवनको अन्तिम पल बाँच्न चाहेका थिए । तर विदेशी भूमीमा उनको ज्यान गएको छ । निधन हुनुअघि उनले आफुलाई नेपाल फर्काइदिन अनेक आग्रह गरेका थिए ।
बैदेशिक रोजगारीको सिलसिला लामो समयदेखि साउदीमा रहेका दिनेश कुमार श्रेष्ठ (गणेश श्रेष्ठ) को निधन भएको छ । उनी साउदीको टमिमी ग्लोबल कम्पनीमा कार्यरत थिए । नेपालमा संखुवासभा खाँदबारी नगरपालिका १० चन्दन्पुर स्थायी घर भएका उनी विगत तिन महिना देखि अस्वस्थ्य थिए ।
बिगत ३ महिनादेखि साउदी स्थित एक अस्पतालमा उपचारमा थिए । दुबै मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि तीन महिना अघि अस्पताल भर्ना भएका उनी नेपाल फर्कन चाहन्थे । तर उनको अन्तिम इच्छा पनि पुरा भएन । उनले विदेशी भूमीमै आफ्नो अन्तिम स्वास फेरेका छन् ।
ढकालका अनुसार झन्डै २० वर्षदेखि साउदीमा कार्यरत रहेका श्रेष्ठको आवश्यक हेरचाहा नपुगेको र डाक्टरले राम्रोसँग ख्याल नगरेको कारण असार १४ गते अस्पतालमै निधन भएको बताइएको छ ।
जीवित छंदै नेपाल ल्याउन नपाएपनि अब उनको अन्तिम संस्कार भने नेपालमै गर्ने परिवारको चाहना छ । परिवारका सदस्यले उनको अन्तिम संस्कार नेपालमै गर्ने ब्यवस्था मिलाउन सरकारसंग आग्रह गरेका छन् । शव नेपाल ल्याउन पहल गरिदिन साउदीस्थित सामाजिक अभियानता, संघ संस्था लगायत सरकारलाई श्रेष्ठको परिवारले आग्रह गरेका छन् ।
दाेलखामा २ जनामा काेराेना भाइरस संक्रमण
इजरायलमा नर्सिङ क्षेत्रमा नेपालीलाई पुनः रोजगारीको अवसर, पहिलो वर्ष ५ सय केयरगिभर लैजाने
रहिनन् सबैको मनमा राज गरेकी चर्चित अभिनेत्री, आफ्नै घरभित्र भेटियो यस्तो अवस्थामा ला’श